नेपाल आज | अमला र गाजर खानुस्, स्वप्नदोष हुदैँन
अमला र गाजर खानुस्, स्वप्नदोष हुदैँन
के हो स्वप्नदोष ?
आफ्नो नामका विपरीत स्वप्नदोष (Nocturnal emission) कुनै दोष नभएर एक स्वाभाविक शारीरिक क्रिया हो जसका अन्तर्गत एक पुरुषलाई निंदाएका बेला वीर्यपात (स्खलन) हुन जान्छ, त्यतिखेर पुरुष एक स्वतःस्फूर्त यौनानन्दको अनुभव पनि गर्दछन् ।
स्वप्नदोष कुनै खराव कुरा होइन । यो तपाइँको जवानीको संकेत मात्र हो । अत्याधिक मात्रामा स्वप्नदोष हुन्छ भने पनि आत्तिनु पर्दैन । यो कुनै रोग होइन । यसले कुनै स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउँदैन ।
कतिपय ब्यक्तिलाई हप्तामा कैयौं पटक स्वप्नदोष हुन्छ । कतिपयलाई भने जीवनभर नगन्यमात्र हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा स्वप्नदोषको सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ ।
यो प्रक्रिया स्त्रीहरुमा पनि देखिन्छ । स्वप्नदोष, किशोरावस्था र शुरुआती वयस्क वर्षहरु का बेला हुने एक सामान्य घटना हो, तर यो उत्सर्जन यौवनका पछि कुनै पनि समय हुन सक्छ । आवश्यक छैन कि प्रत्येक पुरुष स्वप्नदोषलाई अनुभव गर्छन्, जहाँ अधिकांश पुरुष यसलाई अनुभव गर्दछन् त्यहीं केही पूर्ण रुपले स्वस्थ र सामान्य पुरुष पनि यसको अनुभव गर्दैनन् । स्वप्नदोषका बेला पुरुषहरुलाई कामोद्दीपक सपना आउन सक्छ र यो स्तंभन बिना पनि हुन सक्छ ।
स्वप्नदोषका बेला यौनसुखका बद्ला झुनझुनी, जस्तै पिशाब निंस्कदै गरेको वा जस्तै पिशाब लागेको जस्ता अनुभूति हुन सक्छ । धेरै किशोर यस बेला निन्द्राबाट जाग्छन् र तिनमा एक लज्जाको भावना आउँछ कि उनले सुत्दा बिछाउँना गिलो गरेकोछ । सामान्य अवस्थामा स्त्रीसँग संभोगरत पुरुषले चरम अवस्थामा वीर्यपात गर्छ तर स्वप्नदोष हुँदा चाहिँ स्त्रीभोगको कल्पनाले नै वीर्यपात गराउँछ ।
स्वप्नदोष, एक कामोद्दीपक सपना पछि हुने एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया हो जसको कारण पुरुष व्यक्तिको भित्र लगातार उत्पादित हुँदा रहेको शुक्राणु कोशिकाहरुको प्रशस्त रुपमा शरीरबाट बाहिर निकाल्छ ।
कसरी कम गराउने ?
–दिनहुँ व्यायाम गर्नाले शरीरको ऊर्जा सही ठाउँमा उपयोग हुन्छ र स्वप्नदोष हुन पाउँदैन।
– स्वप्नदोष कम गर्न भिटामिन–बीयुक्त खानेकुरा बढी खाने गर्नुपर्छ ।
– राति अबेरसम्म जागा रहने गर्नु हुँदैन । सुत्ने र उठ्ने समय नियमित गर्न सकियो भने स्वप्नदोषको समस्या कम हुँदै जान्छ ।
– अमला र गाजर खाने गर्नाले पनि स्वप्नदोषको क्रमलाई कम गर्न सकिन्छ ।
– तुलसीको जरालाई स–साना टुक्रा पारी पिसेर पानीसँग पिउने गर्नाले पनि स्वप्नदोष हुने क्रम घट्छ ।
– अदुवा र प्याजको रसलाई मह र गाईको घ्यूसँग मिसाएर खाने गर्नाले पनि स्वप्नदोष कम हुन्छ ।